Weerar ka dhacay Guriceel | Keydmedia
GURICEEL, Soomaaliya - Wararka laga helayo magaaladda Guriceel, ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xalay weerar laguq aadey Gaashaanle Sare C/llaahi Cabdi Raage, oo kamid ah Saraakiisha Nabad Sugida Galmudug.
Goobjoogiyaal khadka Taleefonka kula hadlay Keydmedia Online ayaa sheegaya in C/llaahi Cabdi uu ka badbaadey weerarka oo ahaa bam-gacmeed gurigiisa lagu tuurey, mana jiraan wax khasaaro ah oo xubnaha qoyskiisa kasoo gaarey qaraxa.
Ninkan ayaa May 2019 fashiliyay qarax ismiidaamin ah, oo la doonayay in lagu khaarijiyo hogaanka Ahlu Sunna, kadib markii uu qabtey ninkii weerarkaas fulin rabey xili uu kusii jeeday goobtii ay fadhiyeen Sheekh Maxamed Shaakir, Maclin Maxamuud iyo xubno kale.
Lama oga cida ka dambeysa, balse waxaa lagu soo waramayaa in Magaaladda uu ka taagan yahay muran u dhaxeeya Maamulka Galmudug iyo Kooxda Ahlu Sunna, oo iyadu magaaladda maamusha, inkastoo awoodeeda degaanada kale sii yaraanayso.
Sarkaalkan la weeraray ayaa ahaa mid kamida ilaalada gaarka Sheekh Maxamed Shaakir, oo dhawaan awoodiisii lagu soo afjaray Dhusamareeb kadib doorashadii Qoor-Qoor Febuary 2020, kadib markii Malleeshiyaadkiisa looga adkaadey dagaal.
0 Comments Topics: dhuusamareeb galmudug guriceel soomaaliya
Qoor Qoor oo Gaalkacyo gaarey
Warar 28 September 2020 17:02
Madaxweynaha ayaa maalmahan socdaal dhulka ah ku bixinayay degaanno katirsan Galmudug, oo Cadaado ay kamid tahay.